आशा सिक्टा सिँचाईको, भर आकाशको ! | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०५ आशा सिक्टा सिँचाईको, भर आकाशको !
जेठ ८, नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट खेतवारीमा अन्नवाली फलाउने आशा बोकेका बाँके र बर्दियाका बासिन्दा आकाशकै भरमा अन्न उत्पादन गर्न बाध्य छन् । पानी पाउने आश्वासन पाएको बर्षौं वितिसक्दा पनि आकाशकै भरमा किसानले खेती गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
चुनावताका सिक्टा सिँचाईको पानी ल्याई समयमै खेतीपाती गर्ने आश्वासन पाएका स्थानीयबासीमा दिनप्रतिदिन सरकारका मन्त्री र नेताप्रति विश्वास लाग्न छाडिसकेको छ । जुन नेता आएपनि समयमै आयोजना बन्छ भन्छन् तर बर्षौं वितिसक्दा पनि सिक्टाको पानीबाट खेती गरेर जीविका चलाउँला भन्ने आशा सपनामै सिमित रहेको बाँकेका दिपेन्द्रबहादुर बुढाले बताए । उनले भने, ‘सपना देखाईयो, सिक्टा सिँचाईको पानी देखिएन ।’
चालु आवमा पनि बाँकेका किसानले सिक्टा नहरको पानी पाउन सक्ने छैनन् । गत साउन मा विभिन्न ठाउँमा नहरको बाँध भत्किएपछि समयमा मर्मत–सम्भार हुन नसक्दा किसान चिन्तित छन् । सिक्टा आयोजनाको लापरवाही र सरकारको उदासिनताले यस क्षेत्रका किसानले सिक्टाको पानी उपयोग गर्न केही बर्ष अझै पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । भत्किएका नहरहरु मर्मत सम्भार नहुँदा आयोजना आसपासका किसान चिन्तित् मात्र छैनन बर्षा लाग्ने वित्तिकै आकाशको भर पर्न बाध्य भएको स्थानीय विष्णु पौड्यालले बताए ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले पहिलो चरणमा पश्चिम नहरबाट बाँकेका ५० हजार परिवारमध्ये २१ हजार परिवारलाई सिंचाइ सुविधा दिने योजना बनाएको थियो । पटक–पटक बाँध भत्केपछि चर्को विरोध र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि मर्मत–सम्भारमा बाधा पुगेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले बताउने गरेको छ । ‘बाँध भत्केदेखि नै मर्मत–सम्भार गर्न पाएको भए अहिलेसम्म किसानले सिंचाइका लागि पानी पाइसक्ने थिए’, सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद नेपालले भने, ‘तीन महीना अघिनै मर्मत–सम्भारका लागि अनुरोध गरे पनि केन्द्रबाट निर्देशन आउन नसक्दा ढिलाई भएको हो ।’ उनले नहरमा पानी परीक्षण गर्दा त्रुटि थाहा हुनासाथ मर्मत–सम्भार गर्न नपाउँदा समस्या झनै जटिल भएको बताए ।
‘पानी छोड्दै मर्मत–सम्भार गर्दै गरेको भए अहिलेसम्म मर्मतको काम सकिएर कृषकको खेतवारीमा पानी पुगीसक्थ्यो’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको गत बैशाखमा हेलिकप्टर मार्फत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । १० बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिक्टा नहरको मर्मत–सम्भार गर्ने निर्णय गरि अनुमानित लागत पठाउन सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस लगत्तै आयोजनाले वस्तुगत अध्ययन गरी अनुमानित लागत पठाए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छैन । एकहप्ता भित्र रकमसहितको परिपत्र आउने बताउँदै उनले भने–‘रकम र कार्यादेश आए पनि यस वर्षको धान खेतीका लागि नहरमा पानी छोड्न सकिदैन ।‘ ‘नहर मर्मत गर्न कम्तीमा तीन महीना लाग्ने अनुमान छ, एक महीनामा मर्मतको काम सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन’, नेपालले बताए ।
पश्चिम मुल नहरको ४५ दशमलव २५ किलोमिटर मध्ये ०–१८ किलोमिटरसम्मको नहरमा कुनै पनि समस्या नभएको आयोजना निर्देशक नेपालको भनाई छ । उनले २०–२६ किलोमिटरमा अधिक र २६–३४ किलोमिटरमा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । मुल नहरको ०–१८ किलोमिटरमा पानी छोड्न सकिन्छ, यस क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या छैन तर मर्मत–सम्भार गरेको लामो समय भएकोले धेरै ठाउँमा समस्या देखिन सक्ने उनी बताउँछन् ।